MAHAJANGA : Manjaka any anaty fiarahamonina ny tabataba alina sy antoandro
Manomboka ny volana jona ka hatramin’ny faramparan’ny volana oktobra dia mijaly ny sofin’ny mponin’i Mahajanga. 29 juillet 2021
Tsy matory isaky ny faran’ny herinandro, ary na ny ankizy manomana fanadinana aza dia tsy miaina anaty fitoniana sy fahanginana ahafahany manao famerenana araka ny tokony ho izy akory. Ny anton’izany dia ny fanatontosana ny Fanompoa sy ny Serana ary ny Forazaza. Voafetra ho andro vitsivitsy ihany ny fankalazana ny Fanompoa no sady lanonana iarahan’ny rehetra sy azon’ny rehetra atrehina. Tsy toy izany mihitsy fa fetim-pianakaviana ny Serana sy ny Forazaza, ka samy afaka manao ny azy ny tsirairay sy ny rehetra, ka zary isa-kerinandro dia misy foana, mandritra ny volana maromaro.
Ny Serana moa dia famindrana sy fitondrana mody an-tanindrazana ny taolambalon’ny olona iray izay nalevina teto Mahajanga aloha na karazana famadihana. Mialoha ny hangadiana ny fasana nandevenana dia efa misy ny tsimandrimandry ka mozika mafibe sy fisotroan-toaka no ataon’izy ireo amin’izany. Matetika aza dia tsy misy vono omby akory fa dia toaka no andraisana ny vahiny. Rehefa azo ny taolambalo, ny manan-katao dia mitondra ny azy amin’ny fiarakodia mankany amin’ny toerana hiomanana ny hitondrana azy mody. Ny tsy manan-katao kosa dia mibata izany an-tsoroka ary entina mandihy eny amin’ny arabe. Matetika no efa mamo ireo mpanatrika amin’izany ka sady manembantsembana ny fifamoivoizana no ahiana hanaparitaka otrik’aretina raha toa ka areti-mifindra no nahafaty ilay taolambalo nofongarina. Ny Forazaza kosa dia famorana zazalahy. Saika samy manao azy io daholo manerana ny Nosy rehefa Malagasy. Amin’ny ankamaroan’ny foko dia alina iray mialoha ny hanapahana ilay zazalahikely no misy tsimandrimandry ary maraina be no anatanterahana ny fanapahana ny zaza. Rehefa vita iny dia samy manatitra ny kilalao ireo nasaina ary raha ela indrindra dia ny tontolo andro no miara-mikorana.
Avy eo kosa dia samy mamonjy fodiana. Tsy izany anefa ny zava-miseho eto Mahajanga fa efa lasa fitadiavam-bola ny Serana sy ny Forazaza. Manomboka ny zoma na ny alakamisy mihitsy dia efa midobodoboka ny mozika. Izay fanamafisam-peo farany mafy no ampiasaina, mbola ampiana “megaphone” apetaka amin’ny hazo ambony be. Amin’ny alina moa vao mainka ampiakarina ny fanamafisam-peo, hany ka toy ny eo am-poto-tsofin’ny mpiara-monina izay mitady fialan-tsasatra no maneno ny mozika. Mitohy andro aman’alina izany ary tsy tapitra raha tsy ny alahady alina, ary misy tsy mijanona raha tsy ny alatsinainy maraina. Manoloana izany rehetra izany dia tsy misy miteny ny eny anivon’ny fokontany.
Araka ny fanazavana azo dia fidiram-bola ho an’ireo fianakaviana manao Fora zaza na Serana ny fety. Mitondra vola famangiana ireo manotrona ka raha 10 000 Ariary ny vola entina dia mahazo zava-pisotro STAR tavoahangy kely. Raha 15 000 Ariary kosa dia mahazo zava-pisotro STAR tavoahangy lehibe… Ny sisa kosa dia toaka no bobohana. Atao maromaro ny andro mba hahatongavan’ny olona, izay tsy afaka amin’ny andro iray, afaka amin’ny andro hafa. Vola an-tapitrisa mihitsy izany no miditra amin’ny fianakaviana iray mandritra ny fety toy ireny no sady tsy andoavan-ketra. Ny olana anefa dia atao an-kalamanjana ny fety, ary alefa faran’izay mafy ny mozika ka lasa miteraka fahasorenana ho an’ny maro. Araka ny fanazavana azo teny anivon’ny kaominina dia alina iray ihany matetika ny fahazoan-dalana omen’izy ireo saingy ny tompon’ny fety mihitsy no manararaotra. Misoratra amin’ny fahazoan-dalana ihany koa ny tsy maintsy ampidinana ny fanamafisam-peo aorian’ny amin’ny 10 ora alina saingy ny tompom-pety ihany koa no tsy manaja ny fepetra, moa tsy misy manara-maso izy ireny.
Hentitra ny Polisy monisipaly amin’ny bar
Misy lalàna navoakan’ny prefektiora ny 17 avrily 2012, hoy i Marcel Tsiaraso, kaomandin’ny Polisy monisipaly, manome fahefana ny Polisy monisipaly handray andraikitra manoloana ny fandikan-dalàna ataon’ny bar. Tafiditra anatin’ny andraikitra azon’izy ireo raisina ny fahafahana manakatona ny bar tsy mikatona amin’ny ora voafetra. Tafiditra anatin’izany ny bar mitabataba amin’ny alina, ka manakorontana ny manodidina. Tokony ho tapitra amin’ny 10 ora alina ny tabataba, hoy hatrany izy. Mbola afaka manasazy ireo mamoaka seza eny an-tokotany sy an-dalambe ary ambony “trottoirs” ihany koa izy ireo. Efa midina ifotony isan’andro amin’ireo toerana misy trano fisotroana izy ireo manara-maso sy mampihatra ny lalàna ankehitriny. Afaka manatona azy ireo ihany koa izay mahatsapa ho voatohintohina noho ny tabataba ataon’ny bar.
Tsy ny Serana sy ny Forazaza ihany
Tsy ny Serana sy ny Forazaza ihany anefa no miteraka tabataba eny amin’ny fiarahamonina fa hatramin’ny nahamora ny vidin’ny fanamafisam-peo dia ifaninanana ny fahazoana sy fananana azy. Lasa ifaninanana toy izany ihany koa ny fananana ny matanjaka sy mafy feo. Itarafana ny haavon’ny fanabeazana azon’ny olona iray sy ny toerany eo amin’ny fiarahamonina izany. Matetika ireo nianatra sy manana toerana ambony ara-tsosialy dia tsy mandefa mozika mafibe. Ireo mpanao bar, na mpanao asa an-tselika sy ireo asa tsotsotra kosa dia tsy mihambahamba mihitsy fa natao hiantsoana mpanjifa ny mozika mafy. Tsy fantatra hoe fandinihana sa fizahana manokana avy aiza no nahitana izany. Misy sokajin’olona vao misokatra ny masony amin’ny 5 ora maraina dia efa mandefa mozika mafy mandra-pahatongan’ny amin’ny 10 ora alina. Anisan’ny efa malaza amin’izany ny fokontany Tsararano sy Petite plage iny, ankoatra ireo sokajiana ho “bas quartier”. Ilay takelaka nisy soratra hoe “La ville de Majunga aime le silence” eo am-pidirana ny tanànan’i Mahajanga iny moa dia efa ela no nisy nanongotra. Misy ihany koa ny lalàna mametra ny tabataba na amin’ny andro antoandro aza fa tsy misy fampiharana.
Misy fiantraikany ratsy amin’ny fahasalamana ny tabataba
Tafiditra amin’ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka ny fiarovana ny vahoaka amin’ny tabataba “nuisances sonores” na koa “pollution sonore”. Tsy mbola misy ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana Malagasy mikasika azy io. Maro anefa ny voka-dratsy sy ny aretina aterany. Miteraka fikorontanan’ny torimaso voalohany indrindra ny tabataba amin’ny alina raha vao mihoatra ny 40 décibels, izay tsy fahampian’ny torimaso izay nefa dia miteraka havizanana maharitra. Miteraka “depression” ihany koa, mampisy “stress”, ary mampidina ny hery fiarovana izay tena loza mihantona amin’izao fiparitahan’ny coronavirus sy ny endriny vaovao isan-karazany izao. Mampasiaka ihany koa na “irritation permanente” ka tsy mahagaga raha masiaka sy romodromotra ny olona eny an-dalambe ; ka zavatra tsy misy dikany dia mampiady sy mampikorontana. Anisan’ny aretina azo avy amin’ny tabataba koa ny “acouphène” izany hoe mamorona feo ny sofina fa tsy mandray feo fotsiny intsony. Mety mampihena ny fahenoana ihany koa na mamparenina mihitsy raha mafy loatra sy mitohy ny tabataba.
Araka ny nambaran’ny OMS na “Organisation Mondiale de la Santé”, amin’ny tontolo manodidina dia faharoa amin’ny fanomezana aretina ny tabataba, manaraka ny fahalotoan’ny rivotry ny tontolo iainana. Any Frantsa moa dia misy lalàna mihitsy mikasika ny tabataba ao amin’ny andininy R 1334-31 du Code de la santé publique : “Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé”. Izany hoe raha adika malalaka dia tsy tokony hisy tabataba na feo mafy hanembantsembana ny filaminana sy ny fahasalaman’ny mpiray vodirindrina amin’ny haelany na fiverimberenany na hamafiny, na amin’ny toerana natao ho an’ny daholobe na amin’ny toerana manokana.